राणाको शासन हल्लाउने योगमाया « Loktantrapost
राणाको शासन हल्लाउने योगमाया
२५ फाल्गुन २०७३, बुधबार १७:०५
योगमायाको जन्म सम्वत् १९१७ सालमा भोजपुरको दिङ्लामा भएको थियो । बाँचुन्जेल उनले समाजका विकृतिहरू चिर्नमै समय लगाइन् । त्यति बेलाको त्यो सत्य घटना पनि आज एकादेशको दन्त्यकथाझैँ मानिन्छ । समाजको त्यही कठोर शासन प्रतिविद्रोहको चरम स्वर उराल्ने क्रममा उनले सम्वत् १९९८ असार २२ गते शनिबार आफ्ना अनन्य भक्तहरू समेतलाई समेटेर जल समाधि लिएकी थिइन् ।
योगमाया नेपाली साहित्यमा क्रान्तिकारी नारीहरूकी प्रतीक हुन् । बूढी औँठाको ल्याप्चेका भरमा आफ्नो हस्ताक्षर दिने योगमाया नै त्यस्ती आँशु कवयित्री हुन् जसले जे देख्यो त्यही फररर भन्न सक्थिन्, जे भेट्यो त्यही विषयमा कविताबाट बोल्न सक्थिन् र जे सुन्यो त्यही विषयलाई कविताबाटै बिट मार्न सक्थिन् ।
योगमाया त्यतिबेला जन्मेकी थिइन् जुन बेला नारीले रजस्वला हुनु अघि नै वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु पथ्र्यो । त्यसैअनुरूप योगमायालाई पाँचै वर्षमा उनका बुबा श्रीलाल न्यौपाने र आमा चन्द्रकलाले कन्यादान गरेका थिए । त्यसबेला योगमाया न्यौपानेको बिहे रामहरि कोइरालासँग भएको थियो । तर यिनको बिहे भएको दुई वर्षमा यिनका पति स्वर्ग गए । सात वर्षीय योगमायाका लागि रामहरि कोइरालाको मरण कुनै पीडादायक विषयसूची पनि बन्न सकेन । त्यसैले उनी फेरि आफ्नै बालक्रीडामा नै मिसिन थालिन् ।
दिन छिप्पिंदै जाँदा योगमाया माथि अनेक सामाजिक कुसंस्कारका वज्र ठोक्किन थाले । कतिसम्म भने तत्कालीन समाजबाट प्राप्त अपमान, घृणा र तिरस्कारका पीडाले उनको शरीर भरिन पुग्यो ।अलच्छिनी र पोइटोकुवीको लाञ्छनाले रङ्गिदा नरङ्गिदै उनले सत्र वर्ष टेकिन् । अनिगाउँकै प्रजापति डोटेल जैसीसित भागेर उनी आसाम पुगिन् । यी दम्पतीबाट एउटी छोरी नैनकलाको पनि जन्म भयो ।
केही वर्षपछि योगमायाले आफ्ना गाउँमा पुराण लाग्ने हल्ला सुनिन् । त्यसपछि डोटेल दम्पती छोरी च्यापेर पुराणस्थल पुगे । जनकलाल शर्माको ’जोसमनी सन्त परम्परा र नेपाली साहित्य’ नामक ग्रन्थमा लेखिए अनुसार पुराणको प्रसङ्ग थियो ‘परस्त्री वा परपुरुष गमन गर्नाले भविष्यमा रौरवीय नर्कको यातना भोग्नु पर्छ ।’ यत्तिकैमा पुराणको अर्को प्रसङ्ग आयो ‘यदि अज्ञानवश कसैले यस्तो अपराध गरेको रहेछ र ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यो अपराध त्याग्यो भने त्यसको प्रायश्चित्त हुन्छ ।’
योगमायाले मन दिएर नै पुराणका सबै पाठ सुनिन् । पुराणको कथाले योगमायाको मन दस चिरा भयो । त्यसपछि उनले आफ्ना पति प्रजापति डोटेलसँग यसबारे छलफल गरिन् । अनि यिनीहरूले एक अर्कामा छुट्टिएर बस्ने निर्णय गरे । त्यसबेला योगमायाकी छोरी नैनकलाचाहिँ योगमायासँगै बस्ने सहमति पनि भयो ।
योगमायाले आफ्नो हृदयान्तरको विस्फोट पोख्न छाड्दिनथिइन् । त्यसैले उनले कविताका अक्षर प्रस्फुटन गर्न थालिन् । आमाका शब्द एकएक गमेर नैनकलाले आफ्नो मनमस्तिष्कको कम्प्युटरमा राख्ने गर्थिन् । वास्तवमा योगमाया जति कविता भन्थिन् नैनकला त्यति नै कण्ठाग्र पार्ने गर्थिन् । योगमाया र नैनकला दुवै निरक्षर थिए ।
योगमाया स्वर्गद्वारी पनि पुगिन् । उनी स्वर्गद्वारी गए ताका स्वर्गद्वारीका चैतन्य महाप्रभु अभयानन्द द्वितीयले त्यहाँ प्रसिद्धि पाइसकेका रहेछन् । योगमाया पनि महाप्रभुका कृत्यबाट सुरुमा नै आल्हादित बनिन् ।त्यही परिणतिले उनी पनि महाप्रभुका साथ सत्सङ्गमा समर्पित भइन् ।
योगमायाको आचरणले महाप्रभु पनि प्रसन्न बने । त्यसैले उनी चैतन्य महाप्रभुबाट दीक्षित पनि भइन् । अनेक साधना गरेर योगमायाले वर्षौं वर्ष गुफामा नै बसेर साधना गरिन् । जाडो दिनमा उनी आधा महिनासम्म अरुण नदीमा कम्मरसम्म डुबाएर साधनारत पनि भइन् । गर्मी महिनामा धुनी जगाएर आगाका रापसँगै उनले आफ्नो साधना प्रधानकर्म पनि गरिन् । उनलाई न जाडो हुन्थ्यो न गर्मी हुन्थ्यो । वास्तवमा उनले एउटा विशेष ईश्वरीय शक्ति नै प्राप्त गरेकी थिइन् ।
योगमाया एकातिर धार्मिक नसामा डुबेकी थिइन् भने अर्कातिर राणा शासनले जनमनमा आतङ्कित पारेको सामाजिक स्थितिबाट पनि उनी फुत्कन सकिनन् । सतीप्रथा हटाइयोस्, जातभातको रीतिरिवाज हटाइयोस्, जनताले न्याय निसाफ पाऊन् र शोषणरहित समाजको सृजना होस् आदि माग राख्तै योगमायाले सामाजिक परिर्वनका लागि सांस्कृतिक आन्दोलनको शङ्ख फुकिन् । उनी न्याय माग गर्दै पैदल हिँडेर काठमाडौंसम्म पनि आइन् ।
त्यतिखेर योगमायाका मागहरू पुर्याउन श्री ३ जुद्धशमशेरले उनलाई वचन पनि दिए । तर क्रमशः श्री ३ आनाकानीमै रुमल्लिन थाले । वास्तवमा योगमायाको सामाजिक समय सन्दर्भका जायज मागका कारण श्री ३ को मन नै धमिलिँदै थियो । त्यसैले श्री ३ ले न्याय दिने देखावटी वचन दिई अनेक प्रपञ्च रचेर उनलाई दण्ड दिने अभिप्रायले विभिन्न कदम चाले । तर श्री ३ हारे र योगमायाको जित भयो । त्यतिखेर उनले जुद्धशमशेरको बेलाका दरबारिया विद्वानहरूसँगको शास्त्रार्थमा विजय हासिल गरेकी थिइन् । स्वर्गद्वारीका चैतन्य महाप्रभुको शिक्षा, दीक्षा र ज्ञान योगमायाको मन, मस्तिष्क र विवेकको ढुकुटीमा शक्तिको स्वरूप भएर बसेको थियो । त्यसैले उनलाई हराउने पण्डितहरू बिरलै पाइन्थे । त्यस बेलाको उनको प्रचण्ड बौद्धिक शक्ति देखेर जुद्ध शमशेर तीन छक्कै परेका थिए ।
योगमाया काठमाडौंबाट भोजपुर दिङ्गलाको मझुवा बेंसीस्थित आफ्ना आश्रममा फर्केपछि झन् विद्रोही भइन् । त्यही विद्रोहको पराकाष्ठामा उनी कविता बोल्दै जान्थिन् र उनकी छोरी नैनकला आमाका ती शब्द कण्ठाग्र पार्दै जान्थिन् ।
योगमाया दिङ्गला पुगेपछि उनी चैतन्य महाप्रभुको कर्तृत्व र व्यक्तित्वको प्रचारमा लागिन् । साथै दिङ्लामा चैतन्य महाप्रभु अभयानन्दले गरेझैँ विशाल यज्ञ गर्न उनी जुटिन् । उनी कठिन योगसाधनामा लागिन् र धाराप्रवाह प्रवचन र कविता वाचन गर्न थालिन् । जनकलाल शर्माका अनुसार भोजपुरको दिङ्लामा १९९७ सालमा ठूलो यज्ञको आयोजना भएको थियो र त्यहाँ श्रद्धालु समाजको खूबै भीड लागेको थियो । तर त्यो यज्ञ सदाको भन्दा भिन्न थियो । उनले त्यहाँ उपस्थित सबै चेलाचेलीहरूलाई भनिन्–‘अब भक्तहरूले बाँच्ने युग छैन । अतः यसै यज्ञको समाप्तिका दिन पूर्णाहुतिका रूपमा यज्ञकुण्डमा प्रवेश गरेर अग्नि समाधि लिनुपर्छ ।’ योगमायाको घोषणा अनुसार त्यसै बेला उनका दुई सय चालीस जना भक्तहरूले यज्ञकुण्डमा हामफाली प्राण त्याग्ने निर्णय गरे ।
योगमायाका अग्नि समाधि सम्बन्धी घोषणा र यज्ञकुण्डमा ज्यानअर्पण गर्न जुर्मुराएका उनका अनुयायीका विषयले भोजपुर हल्लियो । त्यहाँबाट त्यो खबर धनकुटामा रहेका राणाका कारिन्दा माधवशमशेरका कानमा पनि पुग्यो । परिणामस्वरूप राणाका निर्देशनअनुसार सेनाले त्यो यज्ञकुण्ड आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । साथै राणाका निर्देशनमा योगमायाका हातगोडामा नेल ठोकियो । अनि योगमाया लगायत उनका भक्त र अनुयायीहरूलाई सरासर जेल चलान गरियो । महिला जति तीन महिना जेलखानामा बसे भने पुरुषहरू चाहिँ साढे दुई वर्षसम्म कैदी भए । त्यस काण्डले पण्डित प्रेमनारायण पनि अठार महिना जेलखानामै कोचिए ।
त्यसबखत राणाका सिपाहीको बन्देजका कारण योगमाया यज्ञकुण्डमा हाम फाल्न पाइनन् । त्यसपछि आफ्ना भक्तहरूलाई पछि लगाएर उनी अरुण पुगिन् । ज्ञानमणि नेपालका अनुसार ‘योगमाया अरुण किनारा बाहिर मझुवाबेसीमा सम्वत् १९९८ असार ३१ गतेतिर एक कुटी बाँधेर बस्न लागिन् । उनकी एउटी भाइबुहारी गङ्गा न्यौपाने चाहिँ उनकी पक्का भक्त भइन् । यी गङ्गा प्रेमनारायण (योगमायाका भक्त) कै दिदी थिइन् । यी गङ्गा पनि योगमायासँगै बस्थिन् । अरुण नदीको किनारामा उभिएर फेरि योगमाया बोलिन्–‘हामीलाई अग्नि प्रवेशमा सरकारले बाधा गर्यो । तर आजको दिन अग्निको अभावमा जल समाधि लिनु पनि उत्तिकै लाभदायी हुनेछ । अतः इच्छा हुनेले मेरो अनुकरण गर्नु ।’ त्यसपछि योगमायाले उर्लंदो अरुणको भेलमा हाम फालिन् । उनका अनुयायीहरू पनि क्रमशः जल समाधिमा सहभागी हुँदै गए । हुँदाहुँदै त्यस बेला जलसमाधि लिने नारीपुरुषको सङ्ख्या ६८ पुगिसकेको थियो । त्यसपछि त्यहाँ कतिले हाम फाले र कति घर फर्के ? कसैले त्यसको तथ्याङ्क राख्न सकेन ।
योगमायाको धार्मिक कार्यशैली नै आकर्षक थियो । उनी धुनी बालेर, रुद्राक्षको माला लगाएर, बिगुतको तीन धर्के टीका लगाएर र झाँक्रो फिजाएर आफ्नो आसनमा बस्थिन् । साथै उनका छेउमा पाँच छ फुट उचाइको त्रिशूल ठड्याइन्थ्यो । त्यहीँ बसेर उनी आँखा चिम्लेर धारा प्रवाह धार्मिक र सामाजिक प्रवचन दिन्थिन् । उनको साहस देखेर उनका सेवकहरू भक्तमा रूपान्तरित भए । हरे राम प्रभुका नाउँले परिचित स्वामी पं. प्रेमनारायणले चारैतिर डुलेर योगमायालाई औतारी शक्तिमाताको नाउँले प्रचार गरे । स्वामी प्रेमनारायणले योगमायाका नालीबेली पूर्वी पहाडका रनबन पुर्याए भने काठमाडौं उपत्यकामा पनि उनले योगमायाको यथेष्ट प्रचार गरे । त्यतिमात्र होइन योगमायाका भक्त चेलाहरू पं. कविप्रसाद गौतम र लोचननिधि तिवारीले पनि योगमायालाई शक्तिमाताका रूपमा स्थापित गराए ।
योगमायाले जीवनमा आफूप्रति खप्टिएका प्रत्येक वचनको स्मरण गरिरहिन् । उनले नारीप्रतिको भेदभावका विषयमा विरचित पुराणका कथाहरूको पनि खुलेर नै आलोचना गरिरहिन् । नारीलाई पशुवत् व्यवहार गरेर रचिएका धार्मिक कथाहरू योगमायाका भावनाका शत्रु थिए । लोग्नेमान्छेले जति स्वास्नी राखे पनि हुने आइमाईले चाहिँ अर्को पुरुषसँग बिहे गर्दैमा ऊ समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने जस्ता असमान र भेदभावपूर्ण बेहोराले उनको मन रन्थनिएको थियो । त्यतिमात्र होइन, बाहुन पुरुषले पानी नचल्ने जात ल्याए पनि जात नजाने र बाहुन स्त्रीले चाहिँ आफूखुसी बाहुनैसँगै बिहे गर्दा पनि जुनीभरि बिटुली हुनुपर्ने अवस्थाको उनले घोर भत्र्सना गरिन् । साथै बाहुन नारी तल्लो जातमा पुग्नेबित्तिकै उसले आफ्नो संस्कारबाट हात धुनुपर्ने स्थितिको पनि उनले विरोधै गरिन् ।